Ku dheji! | Martech Zone
Khamiis, Juun 4, 2009 Saturday, April 16, 2016 Douglas Karr
Microsoft waxay Google kula wareegeysaa erey u dhigma raadinta iyo Google = ku xirnaanta. Waa tan ganacsiga ugu horreeya ee ay shirkadda Microsoft waddo.
Waxaan runtii rajeynayaa in Microsoft ay si xoog leh ula tartami karto Google Bing. Maalmihii la soo dhaafay, waxaan u isticmaalay sidii mashiinkeyga raadinta ee aasaasiga ah, waxaanan helayaa natiijooyin la xiriira - taasi waa magaca ciyaarta.
Markaad fiirineyso warshadaha suuqgeynta mashiinka raadinta, Google waxay qabatay shaqo aad u fiican oo qeexeysa waxa raadinta tahay laakiin wax ka badalida dhaqankeena iyo aqbalaada mustaqbalka fog. Dhammaanteen waxaan hadda xoogga saareynaa isku-darka ereyada muhiimka ah - oo waxaan isku dayeynaa oo aan dib u tijaabineynaa markii aanan helin natiijo. Dhinaca gadaal, shirkadaha habeynta mashiinka raadinta ayaa isku dayaya inay nidaamka ku ciyaaraan ololeyaal gadaal ka xirxiraya halkii shirkaduhu ay si fudud u qori lahaayeen waxyaabaha ku qanacsan Backlinking waxay qalloocineysaa ku xirnaanshaha Google waxayna ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn qaar ka mid ah natiijooyinka ugu fiican inay helaan meelaynta ugu fiican.
Dhinac, waxaan fahamsanahay in ereyada dadku u adeegsadaan baaritaanka lama mid aha ereyada ay tahay in ganacsatadu adeegsadaan si loo helo; hase yeeshe, raadintu waa inay tartiib tartiib ulaqabsataa ugana adkaataa arrimahaas. Hadaan raadiyo dhakhtarka ilkaha weyn, maxaa aniga la iigula dhigi waayey bogga natiijooyinka oo ay ku yaalliin Dhakhaatiirta ilkaha ee hareerahayga ku leh dib u eegis togan oo laga helay ilaha qaarkood ilaa darajada # 1?
Taabadalkeed, waxaan helayaa oo keliya tusaha, iyo dhakhaatiirta ilkaha ee qaranku way kala sarreeyaan maxaa yeelay waxay adeegsadeen ereyada muhiimka ah ee cinwaannada boggooda, waxyaabaha ay ka kooban yihiin, iyo gadaal gadaal. Taasi maaha jawaab ku habboon. (Bing ma musbaarayso, sidoo kale). Sidee ayey u adkaan laheyd in kaliya la codsado a joqraafiga-IP-ga on iyo isku dar natiijooyinka raadinta iyo kuwa maxalliga ah qaarkood, sidoo kale?
Waa waqtigii raadinta ay caqli yeelatay, waxaanan rajaynayaa tartanka u dhexeeya Bing iyo Google waxay hagaajineysaa khibrada guud ee raadinta internetka.
Tags: bingganacsiga bingMicrosoftraadin xad dhaaf ah
Waa Waqtigii Shirkaddiinna Hoos Loo Dhigi Lahaa
Jun 5, 2009 at 10: 40 PM
Waad ku mahadsantahay madaxyada ku saabsan BING, kama aanan warqabin illaa iyo hadda. Waxaan gudbiyey websaydho dhowr ah, oo waxaan la yaabanahay haddii ay ii keeni doonto wax taraafik dheeri ah. (Waxaan ku leeyahay Google Analytics bogagga, ma aqaano haddii taasi ii sheegi doonto haddii wax taraafik ah ay ka imaanayaan BING.)
Waxaan mar labaad faallooyinka ku saabsan tartanka laga yaabo inay gacan ka geystaan ​​hagaajinta sirdoonka raadinta, taas oo u muuqata inay si aad ah uga dambeyso wixii farsamo ahaan suurtagal ah.